ေꨟုလူင်ꨀꨱင်းတုင်-ကျိုင်းတုံဟော်နန်းတော် (၁၉၀၆-၁၉၉၁) ~ SAI SENG SERK
Home » SHANHISTORY »ေꨟုလူင်ꨀꨱင်းတုင်-ကျိုင်းတုံဟော်နန်းတော် (၁၉၀၆-၁၉၉၁)
၁၉၀၃ ကျိုင်းတုံစော်ဘွားကြီး စ၀်ကွန်ကျောက်အင်းတလျဲန်း (ꨅဝ်ꨳꨀွꨓ်ꨀꨰဝ်ꨳꨡိꨓ်းတလꨰꨓ်း)
အင်ဒိယနိုင်ငံ သစွှာခံပွဲသို.ကြွရောက်လည်ပတ်ရောက်ရှိခဲ.စဉ် ဟော်မဟာရကြာ ကိုမြင်တွေ.ခဲ.ပြီး
ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျယ်ဝန်းတဲ.ကျိုင်းတုံမြို.ဟာအဲ.ဒီခေတ်ခါတုန်းကစီးပွားအချက်
ဟော်နန်းတော်ကြီးတွင် ဂါရ၀ပြုကန်တော.ခံပွဲ ညီလာခံ တို.ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပလေ.၇ှိပြီး စော်ဘွား
ယင်း၏မြေးတော်ဖြစ်သူ စော်ဘွားကြီး စ၀်စိုင်းလုံသည် ဟော်နန်းကြီး၏နောက်ဆုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ.ပါ
စ၀်စိုင်းလုံသည် ၁၉၄၇ လူမျိုးစုလွတ်တော်သို.တက်ရောက်သည်.အမတ်များအနက် အသက်အငယ်ဆုံး အမတ်ဖြစ်သည်။ထိုစဉ်သူ၏အသက်မှာ(၁၉)နှစ်သာရှိပါသေသည်။
(ဘာကြောင်.အမတ်ဖြစ်သလဲဆိုရင် ကျိုင်းတုံစော်ဘွားမျိုးမို.အမတ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာထက် စ၀်စိုင်းလုံ စာသိပ်တော်သည်အရည်ချင်းရှိသည် ဒါကြောင်.၁၉၄၆ မှာအစိုးရရဲ.တိုက်တွန်းချက်အရ
ဲသြစတြေးလျားမှာကျောင်းတက်နေ ရာမှပြန်လာပြီး ၁၉၄၇ မတ်လ ၁ ရက်နေ.မှစတင်ပြီး နယ်အုပ်
ယိင်းတို.သျမ်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ.တနိုင်ငံလုံး ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ. ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာတော. အာဏာရူးတနှာရူး နေ၀င်းဦဆောင်တဲ.စစ်အစိုးရဟာလက်နက်အားကိုးနဲ.တနိုင်လုံးကိုအာဏာတက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ နယ်ရှင်စော်ဘွားများအားလုံး နဲ.တပြည်လုံးမှာ၇ှိတဲ.နိင်ငံရေးသမားအားလုံး
ကိုအင်းစိန်ထောင်မှာ ၆ နှစ်တိတိထောင်နန်းစံစေခဲ.ပါတယ်။
စော်ဘွားကြီးစ၀်စိုင်းလုံဟာ အစ်ကိုတော်နှင်.အတူထောင်နန်းစံခဲ.ပြီးနောက် ကျိုင်တုံဟော်နန်းတော်တွင်နေထိုင်ခွင်.မရတော.ပေ။
အရှိန်ဝါကြီးမားလှသော ခမ်းနားမြင်.မြတ်လှစွာမွေးဖွားသန်.စင်လာသော ကျိုင်းတုံပြည်သူတို.ရဲ.
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ဟော်နန်းတော်ကို စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ၏ အစိုးရဌာနရုံးအဖြစ်မောင်ပိုင်စီးအသုံးချခဲ.ပါတယ်။
၁၉၉၁ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နှေ.မှာတော.ရန်ကုန်စစ်ရုံးချုပ်မှအမိန်.စာဖြင်.ဟော်နန်းကြီးဆွေးမြေ
များ ကျိုင်းတုံအကျဉ်းထောင်သားများဖြင်.ဖြိုချဖျက်စီးစေခဲ.သည်။ကျိုင်တုံမှ သံဃာတော်များ
ဖြိုချပြီးသောအုပ်ခဲအပိုင်းစများကိုလမ်းခင်းချသည်။ကျိုင်းတုံမြို.သားတို.ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်း လိုက်တိုင်းစိတ်ထိခိုက် နာကျင်စေမည်.အဖြစ်မျိုးကိုတမင်ဖန်တီးပေးခဲ.သည်။
၁၉၉၄ ခုနစ်မှာတော.ဟိုတယ်နဲ.ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာနမှ ဟော်နန်းနေရာတွင် ကျိုင်းတုံအဆင်.မြင်.
ဟိုတယ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ.သည်။၁၉၉၆ ခုနစ်မှာအပြီးသပ်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေ သန်း 500 အကုန်ကျတယ်လို့သိရပါတယ်၊၊တစ္ဆေ သူရဲခြောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကြောင့် ဟိုတယ်ကြီးမှာမှန်းထားသလောက် မအောင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်၊၊
Get From >>>> Ying Hom FB